Abuurida guddi dhaqaaleyahan oo lagu amaanay dawlada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Abuurida guddi dhaqaaleyahan oo lagu amaanay dawlada
Abuurida guddi dhaqaaleyahan ayaa lagu amaanay dawlada. Somaliya intey burburiyeen kooxihii indhaha la’aa ee S-tu ugu wada horeysay ee ay taageeri jireen reer galbeedka iyagoo lacagta iyo hubka u soo mariya Itoobiya, cagaheeda kuma istaagin.
Tan ugu weyn ayaa ah ayadoo dalku helin madax aqoon leh oo ka saarta burburka xoogan lana timaada siyaasad dhaqaale oo hufan. Waxana bedelkeeda batey fiqiirnimada iyo intii yarayd ee aqoonta lahayd oo dalka ka cararta.
Madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay shalay aqoonyahano dhinaca dhaqaalaha ah, oo dejiya siyaasada dawlada iyo dhaqaalaha dalka. Inkastoo dadkan ay ku jiran ajaanuib la yaqaano heerkooda khabiirnimo iyo daacada ay u yihiin hawsha loo dhiibey.
Aqoonyaganada dhaqaalaha ayaa saadaalin ka bixiya heerka kobaca dhaqaale e dalka isla markaana tilmaama meelaha ugu haboon ee laga mari karo siyaasada dhaqaale si oo helo dal ay miisaaniyadiisu dhan tahay ama is bixin kara.
Dalka ayaa sidan hadda uu ku socdo aan ku shaqayn karin ayadoo miisaaniyada ugu badan ay ku baxdo difaaca shacabka.
Waxa dalka ku hoos nool malaayiin ajaanib ah oo si raaxa ah ugu nool dhaqaalaha geli lahaa dalka ha ahaato dhinaca ciidamada oo la horjoogo in dalku ciidan yeesho ama ha noqoto dhinaca wax soo saarka oo argagixisadu fadhido dhulkii muhiimka ahaa.
Marnaba lama filan in Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ay dalka kor u qaadaan dhaqaalihiisa ama hore ka dhisaan ciidan qaran oo tayo leh, waxana muuqata in ayna ku joogin talaabadii dalku ugu istaagi lahaa cagahiisa.
Mana jirto siyaasad hufan aan ka ahayn isku geynta kharashaadka ka soo baxa Muqdisho iyo deegaanada ku dhow.